DAAWO: Wixii Uu Sameeyey Naby Keita Markii Eden Hazard Sigay Goolka Liverpool Oo Uu Jacayl Kaga Kabsaday Jamaahiirta Reds - Cadalool.com
DAAWO: Wixii Uu Sameeyey Naby Keita Markii Eden Hazard Sigay Goolka Liverpool Oo Uu Jacayl Kaga Kabsaday Jamaahiirta Reds
April 15, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Naby Keiita ayaa u muuqda inuu si buuxda ugu saldhigay Liverpool oo uu qaybtii hore ee xili ciyaareedka ka waayey boos joogto ah, laakiin kulamadii ugu dambeeyey ayuu ahaa aasaasiga iyo xidhiidhiyaha khadka dhexe ee naadiga.
Xiddiga reer Guinea ayaa ciyaartii Southampton dhaliyey gool, waxaanu mid kale raacdsaday markii ay FC Porto ku martigaliyeen Anfield, laakiin labadaas goolba waxa ugu muhiimsanaa kooxdiisa bandhiggii uu sameeyey ciyaartii Chelsea ee Axaddii.
Tababare Jurgen Klopp ayaa go’aansaday inuu Keita ka garab ciyaarsiiyo Fabinho iyo Henderson, waxaana uu 24 jirkani mar kale caddeeyey sida uu ugu qalmayey lacagtii ay Liverpool kasoo bixisay, kaddib markii uu burburiyey Jorginho iyo N’Golo Kante oo uu ka dhigay kuwo maqan oo sidii ay isaga u qaban lahaayeen waqti badan kaga lumay.
Marka ay kubaddu lugtiisa gasho, waxa uu u dhaqaaqayey dhinaca uu goolka Chelsea ka xigto, laakiin indhihiisa ayaa ahaa kuwo u shaqaynaya qaab wareer ah oo uu kula socday dhaqdhaqaaqa dhamaan ciyaartoyga ay isku kooxda yihiin oo uu kubbad taabasho iyo hubanti ku sallaysan uu lugta u saarayey.
Qaybtii labaad ee ciyaarta, markii ay Liverpool la timid labada gool, waxay Chelsea samaysay sare usoo kac, waxaana ay difaaca Reds u maare waayeen qabashada Eden Hazard oo birta uga jaray kubbad, mid kale goolhaye Alisson Becker dirqi kaga badbaadiyey iyo mar kale oo halisteeda lahayd laakiin nasiibku u diiday inay shabaqa gaadho.
Intaas oo kaliya Chelsea may samaynin, laakiin weerar joogto ah ayay ku qaadeen Liverpool illaa uu baasha bidix ee Robertson uu si la mid ah siibashadii Steven Gerrard oo kale uu isaguna u simbiriririxday.
Xaaladda oo halkaas maraysa ayaa waxa door hoggaamineed qaatay Naby Keita oo dejiyey dhamaan kooxda, waxaana xilli uu kubaddu ay lugtiisa ku jirtay uu la hadlay xiddigaha kale ee ay isku kooxda yihiin oo uu u tilmaamay inay beddelaan taatikada ciyaarta si ay guusha u xajistaan.
Henderson ayuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee aqbalay taatikada uu dejiyey Keita, waxaana ugu xigay difaacyahannada.
Kubaddii ugu horreysay ayuu markaaas kaddib u dhiibtay Henderson oo isaguna dib ugu soo celiyey, ka hor intii aanu difaacyahannada u gudbinina waxa uu bixiyey tusaale ah nooca ay tahay inay u ciyaaraan.
Arrintan uu sameeyey oo aad ka daawan karto muuqaalka hoose, waxa uu Keita ku kabsaday in taageereyaashu ay si ballaadhan ugu amaanaan baraha bulshada, iyagoo muuqaalkana in badan isla wadaagay.
Halkan ka daawo muuqaalka Keita iyo waxa uu sameeyey:
Was absolute mayhem before this moment, looks basic but brought so much calm to the team pic.twitter.com/xdC5SHIVk5
— Klopp (@BundesligaLFC) April 14, 2019